Green Way - Greenovator
<p>Greenovator isasocial entreprise launched on the 1st of May 2011 in Yangon, Myanmar. It was founded by three core members that all graduated from the same alma mater at Yezin Agricultural University. All three of them shareapassion and commitment in promoting sustainable agricultural production, the use of natural resources and environment conservation.</p>
မူဆယ်တွင် ပုံနေသည့် သကြားများ ပျက်ဆီးမှု ရှိလာ
" ၆ လလောက်အတွင်းမှာ သကြားအိတ်တွေကို ဒီအတိုင်းဂိုဒေါင်ထဲမှာ ပုံထားရတယ်။ အခုဆို သကြားအိတ်အပုံတွေရဲ့ အောက်ဆုံးသကြားအိတ်တွေက စိုလာပြီး အချို့ဆိုရင် ခဲကုန်ပြီ။ ကြာရင်အကုန်လုံး စိုနေတာနေ အရည်ပျော်ပြီး သကြားတွေ ပျက်စီးတော့မယ် "
ဆီထွက်သီးနှံ အုပ်စုဝင် မြေပဲမျိုးသစ်များ မကြာမီ ထွက်ရှိတော့မည်
စိုက်ပျိုးရေးသုတေသန ဦးစီးဌာနမှ စမ်းသပ်စိုက်ပျိုး သုတေသနပြုနေသည့် ဆီထွက်သီးနှံအုပ်စုဝင် မြေပဲမျိုး သစ်များ မကြာမီ ထွက်ရှိနိုင်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း စိုက်ပျိုးရေးသုတေသန ဦးစီးဌာနမှ သတင်းရရှိသည်။
ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့တွင် တိမ်အသင့် အတင့်ဖြစ်ထွန်းနေပါသည်။
မြိတ်တွင်စိုက်ပျိုးမည့် သြဂဲနစ်သီးနှံများ ဝယ်ယူရန် ဂျပန်နိုင်ငံမှကမ်းလှမ်းထား
မြိတ်ခရိုင်တွင် ဓာတုဆေးဝါးဓာတ်မြေသြဇာမသုံးဘဲ စိုက်ပျိုးမည့်သြဂဲနစ်သီးနှံများကို ဂျပန် နိုင်ငံက ဝယ်ယူရန် ကမ်းလှမ်းထားကြောင်း မြိတ်ခရိုင် အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်း ရှင်များအသင်းမှသိရသည်။
ကုန်သည်များ အနေဖြင့် စားသုံးသူ သက်သာချောင်ချိရေး၊ ထုတ်လုပ်သူ မနစ်နာစေရေးအတွက် ကုန်စည်စျေးနှုန်း မကစားရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ပြောကြား
ကုန်သွယ်မှု တိုးတက်ရေးမှာ အရေးကြီးတဲ့ပို့ကုန်ကဏ္ဍတိုး တက် ရေးမှာ စျေးကွက်အပြင် အရည် အသွေးကိုပါ တိုးချဲ့ဖို့လိုအပ်မှာ ဖြစ်သလိုသွင်းကုန်ပိုင်းမှာလည်း ရေရှည်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက် အ ထောက်အကူပြုမယ့် ရင်းနှီးကုန်စည်များကိုလည်း ပိုမိုတင်သွင်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကြက်သွန်နီကို နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးအပြင် လေကြောင်းနှင့် ပင်လယ်ရေကြောင်းမှပါ တင်ပို့နိုင်ရေး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကြက်သွန်နီ စိုက်ဧက (မိုးနှင့် ဆောင်း) ပေါင်းပါက ဧက ၄၀,၀၀၀ နီးပါး စိုက်ပျိုးလျက်ပြီး တစ်နှစ်လျှင် ကြက်သွန်နီ တန်ချိန် ၁၀ သိန်းနီးပါး ထွက်ရှိကြောင်း သိရ
ဆောင်းနှမ်းသစ်ပေါ်ချိန် တစ်အိတ်လျှင် ကျပ် လေးထောင်ခန့် ဈေးပိုရရှိနေ
လက်ရှိ နှမ်းရောင်စုံ စျေးကွက်အတွင်း နှမ်းပြာသန့် တစ်အိတ်လျှင် ကျပ် ၁၈၅,၀၀၀ ခန့်ရရှိနေပြီး ယခင်နှစ် ယခုလိုအချိန်က တစ်အိတ် လျှင် ၁၈၀,၅၀၀ ကျပ်သာ ရရှိခဲ့
ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့တွင် တိမ်အသင့်အတင့်မှ တိမ်ထူထပ်နေပါသည်။
မြန်မာ့ ထောပတ်သီးကို နိုင်ငံပေါင်း လေးခုသို့ နှစ်စဉ် တင်ပို့နေ
“ ထောပတ်ဟာ အလားလာရှိတဲ့ ဈေးကွက်ဝင် သစ်သီးဝလံ ဖြစ်တယ်။ ပို့ကုန်တိုးမြှင့်ရေးကို ဦးတည်ထား စိုက် ပျိုးဖို့ လိုအပ်တယ်။ နိုင်ငံတကာ ဈေးကွက်ကို ထိုးဖောက်နိုင်ဖို့ဆိုရင် အရည်အသွေးမြင့် အလုံးညီတဲ့ အသီးမျိုးတွေ ရွေးချယ်စိုက်ပျိုးဖို့ လိုအပ်တယ်”
နောက်(၂)ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်။ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတွင် မိုးအနည်းငယ်ရွာနိုင်ပါသည်။
ဒီတစ်ပတ်ကတော့ ဈေးနှုန်းအတက်အကျကတော့ အနည်းငယ်သာရှိပါတယ်။ ဆန်အဝင်ကလည်းပုံမှန်ရှိနေပြီး အရောင်းအဝယ်ကလည်း ပုံမှန်ရှိနေပါတယ်။ ပေါ်ဆန်းဆန်ကတော့ အရောင်းအဝယ်သွက်ပြီးအဝင်ကတော့နည်းပြီး ဈေးက အနည်းငယ်တက်လာခဲ့ပါတယ်။
မိုးကြိုသီးနှံအတွက် ငွေကျပ်သန်းပေါင်း ၅၀၀၀ ကျော် ထုတ်ချေးမည်
" တောင်သူတွေ စိုက်ပျိုးစရိတ် အဆင်ပြေစေဖို့ ချေးငွေကိုလည်း နိုင်ငံတော်ကနေ ဆောင်းသီးနှံ ကနေစပြီး တိုးမြှင့်ချေးပေးနေတာပါ။ အခုမိုးကြို စိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေ ရရှိတော့ ဧကတွေထပ်ပြီး တိုးချဲလို့ရလာမယ် " ဟု မန်နေဂျာ ဦးစုက ပြော
စိုက်ပျိုးရေးသုံး ပစ္စည်းများ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှု မရှိပါက အရေးယူမည်
'' အရင်က ဖြေလျှော့မှု ရက်ပေါင်း ၆ဝ ပေးထားခဲ့ပါတယ်။ အခု စတင်အရေးယူ သွားပါတော့မယ်။ တောင်သူ တွေလည်း သတ်မှတ်ချက်၊ ခွင့်ပြုချက်မရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေ အသုံးမပြုကြဖို့ လိုပါတယ် " ဟု လက်ထောက်ညွှန် ကြားရေးမှူး ဦးမင်းအောင်က ပြော
လယ်ယာမြေများပေါ်တွင် ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲ အခြားလုပ်ငန်းများ မလုပ်ဆောင်ကြရန် အသိပေး
“ လယ်ယာမြေ ဥပဒေပါအတိုင်း တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့တွေကနေ စိစစ် ထောက်ခံ တင်ပြပေးပို့လာတဲ့ လယ်ယာမြေ တစ်ခြားနည်း အသုံးပြုခွင့် လျှောက်ထားခွင့်တွေ စိစစ်ဆောင်ရွက် ပေးနေသလို ဥပဒေနဲ့အညီ တရားဝင်ဖြစ်လာစေရေးနဲ့ ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲ ဆောင်ရွက်နေတာတွေကို ဥပဒေအရ ဆောင်ရွက်သွားဖို့ ဖြစ်တယ်”
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းတွင် အများအားဖြင့်သာယာနေပြီး၊ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နှင့် ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့တွင် တိမ်အသင့်အတင့်ဖြစ်ထွန်းနေပါသည်။
အားသာချက် အားနည်းချက်တွေကိုသိထားတော့ ရှင်းလင်းရလွယ်ကူတာပေါ့
"အားနည်းချက်က အမြင်အာရုံအင်မတန် မှုန်ဝါးကြတယ်။ ကြွက်ကို အစာအဆိပ်လုပ်တဲ့အခါ အရောင်ကိုအဓိက မထားပါနဲ့၊ အနံ့နဲ့ အရသာကို အဓိကထားပါ။ အဓိကကတော့ အနံ့ပေါ့။"
အုန်းသီးကုန်ကြမ်းမှ အဆင့်မြင့်လူသုံးကုန် ထုတ်လုပ်နည်း သင်တန်း
အုန်းသီးကုန်ကြမ်းမှ တန်ဖိုးမြှင့်လက်မှုလူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မည့်သင်တန်းဖွင့်လှစ်သင်ကြားသွားမည်။
မန္တလေးတိုင်းမှ တစ်ပတ်လျှင် ကျွဲ၊ နွားအကောင်ရေ တစ်ထောင်ဝယ်မည်
လက်ရှိတွင် ကျွဲ၊ နွား အကောင်ရေ တစ်ထောင်ခန့် ဝယ်ယူရန်အတွက် တရုတ်ကိုယ်စားလှယ်မှ ယခု ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်နေ့က ကနဦးအနေဖြင့် လာရောက်ကမ်းလှမ်းခြင်းဖြစ်ပြီး၊ မကြာခင်ရက်ပိုင်းအတွင်း ငွေကြေးကိစ္စရပ်များအား ထပ်မံဆွေးနွေးကြမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရ
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ဒုတိယ(၁၀)ရက်ပတ်အတွက် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့တွင် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း (၁)ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။
သေစေနိုင်တဲ့အထိ ပြင်းထန်တဲ့ ကူးဆက်ရောဂါ
လူကိုသေစေနိုင်တဲ့အထိ ပြင်းထန်တဲ့ ကူးဆက်ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
မိုးစပါးနှင့် နွေးစပါးအကြောင်း သိကောင်းစရာနှင့် အခြားဆောင်းပါးများ
နည်းစနစ်မှန် စိုက်ပျိုးရေး စပ်မျိုးစပါးတွင် အလေးပေးနှင့် အခြားဆောင်းပါးများ
ဓာတ်မြေသြဇာနှင့် အာဟာရ စီမံခန့်ခွဲမှု (စပါး)
နဂါးမောက်စိုက်ပျိုးနည်း - ကျော်နိုင်
ကြက်သွန်ဖြူ အကြောင်း သိကောင်းစရာနှင့် စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်
အော်ဂဲနစ်စိုက်ပျိုးရေး၊ အော်ဂဲနစ် အစားအစာများနှင့် ကျန်းမာရေး (ဒေါက်တာခင်မောင်လွင် − FAME)
ရေချို ရေငံနှင့် ရေငံဝင် ဒေသအချို့တွင် စပါးသီးထပ်စိုက်ပျိုးခြင်း
အထွက်ကောင်း စပါးမျိုးများ၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ
အထူးတန်းဝင် ကော်ဖီ ထုတ်လုပ်ခြင်း (အစိုနည်းဖြင့် ကြိတ်ခွဲ ထုတ်လုပ်ခြင်း)
အထူးတန်းဝင် ကော်ဖီ ထုတ်လုပ်ခြင်း (သဘာဝ အခြောက်နည်းဖြင့် ထုတ်လုပ်ခြင်း)
ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ ရိတ်သိမ်းချိန်လွန် နည်းပညာ
ဟင်းသီး ဟင်းရွက်တွင် ကျရောက်တတ်သော ပိုးမွှား၊ ရောဂါနှင့် ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ
ဝါသီးနှံ မျိုးစေ့နှင့် အပင်ငယ်တွင် ကျရောက်တတ်သော ရောဂါများ
လူမူသုတေသန နည်းနိဿယ မိတ်ဆက် (အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ နှစ်ဘာသာဖြင့်)
မက်မန်းပင် အကြောင်း သိကောင်းစရာနှင့် စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်
ပဲမျိုးစုံတွင် ကျရောက်တတ်သော ပိုးမွှား၊ ရောဂါနှင့် ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ
ပိုးသတ်ဆေး ဥပဒေ (မူကြမ်း)
ခရမ်းချဉ် အဝါရောင် ရွက်တွန့် ဗိုင်းရတ်(စ်) ရောဂါ
ဆလပ်ပင် အကြောင်း သိကောင်းစရာနှင့် စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်
စီးပွားဖြစ် သစ်မွှေးပင် စိုက်ပျိုးရေး
စပါးသီးနှံကာကွယ်ရေးနှင့် အထွက်တိုးရေး နည်းလမ်းများ
ဂျင်းသီးနှံ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုအတွက် ကောင်းမွန်သော စိုက်ပျိုးရေး အလေ့အကျင့်များ
ခရမ်းချဉ် အကြောင်း သိကောင်းစရာနှင့် စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်
WWVIEWS ၏ စွမ်းအင်နှင့် ရာသီဥတုဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့အမြင်များ
ရှောက်မျိုးနွယ်ဝင်ပင်များအကြောင်း သိကောင်းစရာနှင့် မျိုးနွယ်ဝင်ပင်များစိုက်ပျိုးနည်းစနစ်
ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်အတွင်း ပုံမှန်အနေအထားရရှိအောင် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ခြင်း
မိရိုးဖလာ ဝိုင် ပြုလုပ်နည်း
မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊ ပဲလွန်းသီးနှံတို့၏ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်ကောင်းများ
သက်တမ်းတိုတိုနှင့် အကျိုးများသည့် ပိုက်ဆံလျှော်
ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံ (၉) မျိုး၏ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်ကောင်းများ (GAP) လမ်းညွှန်ချက်
နှမ်းသီးနှံ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်ကောင်းများ